Loza mitatao ho an'ny olona sy ny haran-dranomasina ny fahalotoan'ny rano maloto. Na dia tsy vaovao aza dia mitohy manerantany ny tsy fisian'ny fifantohana amin'ny fitantanana ny rano maloto sy ny fanaraha-maso.
Ireto pejy manaraka ireto, tranga fanadihadiana, ary diary famintinana lahatsoratra manome fampahalalana momba ny fomba mandrahona ny ranomasina sy ny fahasalaman'ny olombelona, ​​ny fomba fitantanana azy, ary ny fomba fanatsarana ny fitantanana mba hiarovana ny tontolo amorontsiraka. Ny paikady sy ny vahaolana naroso dia natao hanohanana ireo mpitantana haran-dranomasina amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo tompon'andraikitra sy hiaraka amin'ireo mpanapa-kevitra hanalefaka ny fahalotoan'ny rano maloto ao amin'ny ranomasina.
Ho fanampin'ity atiny ity, ny Reef Resilience Network dia mampiantrano andiana hetsika an-tserasera sy hetsika hiresahana sy hamelezana ny olana goavana momba ny fandotoana rano maloto sy ny fomba fanaovan-javatra vaovao hamahana izany. Jereo ny rakipeo ary misorata anarana amin'ny webinar ho avy Eto.